Namuhla sizokubonisa ngobani Repich Natalia. Sikhuluma actress abanamakhono. Wazalelwa 1978 avguse. yekhabo kuyinto Engels ku Saratov esifundeni.
Repich Natalia wafunda e-Art School №6, ukukhetha isigaba upiyano. Ngo-1996, yena iziqu eSikoleni Umculo kwedolobha Saratov. Wafunda eMnyangweni vocal. Ngo-2007, waba umfundi eMoscow State University of Culture and Ubuciko, ngokwenza nokuqondisa umnyango. Ngo 2013 wathola iziqu ngempumelelo kulesi sikhungo. Kusukela ngo-2004 ukhonza njengoba eMoscow State Wezingane Musical Theatre of Chikhacheva.
Repich Natalia - umdlali waseshashalazini ngubani komculo umfanekiso umlingisi losemcoka "Anna Karenina." Ukukhiqizwa "Tarzan" Uvele indima Jane. I "Umlobokazi 'kwaba Larissa Ogudalovoy. Repich Natalia Mona idlalwe emsebenzini wokukhiqiza "Nameless Star". Esikhathini "block ukugawulwa" ukukhunjulwa njengombulali Inga. Matchmaker ukuthi okuhleliwe "Umshado Bal'zaminova". Futhi iqhaza ku-Google Play yezingane "Heroes ezintathu", "Sadko", "Mushroom isiyaluyalu", "itheniphu". Ukukhiqizwa "Little Red Riding Hood", "nje ulinde", "Zhuravlenok" futhi "Mansion" odlale Fox.
Repich Natalia ikusho - "magic" umuntu izimisele ukwenza leli zwe libe yindawo engcono. Kodwa ukhetha ukuqala ukuguqulwa nge ngokwabo. Lo mlingisi kugcizelelwe ukuthi ngisho olulodwa uyakwazi kakhulu. Lokhu abantu okudala ukuphila ngokuvumelana nazo. Ithabo elikhulu Heroine yethu ihlangabezana lokho akwazi ukuba umdlali waseshashalazini. Ufuna ukukhuluma abantu abavela endaweni yesehlakalo futhi njalo ukuthola okuthile ukusho kubo. Umlingisikazi ugcizelela ukuthi ethiyetha - kungcono endaweni ehlukile, lapho amakhulu amaningi eminyaka usulu ayeke imikhuba emibi nokuphila ukhulume zokuziphatha kubantu, futhi manje inkhulumomphendvulwano ezinjalo kudingeka kakhulu. Heroine yethu ugomela ngokuthi kule age yamanje zimbalwa kakhulu ezingaba ngempela ekucebiseni umphefumulo womuntu.
Durov Animal Theatre okuthiwa: umlando, nokuzwa kanye amaqiniso athakazelisayo
Iyini i-carol? Ama-Car Car Folk
Ukumiswa entanyeni: yini ukukhetha futhi yini okufanele uyigqoke?
Famous Russian Paralympians
Ihembe Blue zabesifazane - kuyingxenye esisemqoka wezigqoko
Rest ekhatsi Jurmala ehlobo: ukubuyekezwa. Tours ekhatsi Jurmala
"Dentinox": imibono mayelana izidakamizwa. intengo Umhlahlandlela
Yxo.warmportrait.com - indlela ukususa igciwane?
Indlela ukukopela umshini wokugembula? Indlela ukukopela umshini amathoyizi? Kufanele ngenzeni ngakho?